Best of best - EXOKleaderSuho - Wattpad
#angst #romance #action #sudo #mystery
The diary of shisong oath[Hiatus]
16K 2K 11
51.5K 3.1K 14
I'll be always right behind you....
5.2K 311 1
In 1995, Kris wasayoung famous actor and Chanyeol wasawaiter at one of the coffee shops in "Sampoong Supermarket", the most popular and biggest supermarket in Seoul. That coffee shop was Kris' favourite and he used to come there whenever he was free. One day, Kris came to that coffee shop and met Chanyeol for the...
《ပြိုင်မျဉ်းနှစ်ခုမှ ပေါက်ဖွားလာသော အချစ်》
11.5K 1.1K 7
Wu Yi Fan's As Kris Kim Jung Myeon's As Suho HoMo FanFic............................ By::::Chan_Soo_Candy
When will he know that I Love him?-_-
10K 832 42
Exo came to Myanmar At Baekhyun's BD. The exciting moment with You & baekhyun creatareal love or not ! Plz w8 & hope to my fic !! xie xie .........
7.7K 732 6
13.4K 820 3
Kris lost almost everything he loves in his life.He lost everything... but he never gives up and stays strong as much as he can. He always writes his feeling only in the book withatiny golden lock but never shows outside.
8.6K 506 12
71.4K 7.2K 33
KrisHo & Sulay
180K 16.6K 47
Chanbaek fic Chanyeol is an idol Baekhyun will work asamanager of chanyeol Please enjoy my fic
5K 253 6
ဖတ်​ဖူးတဲ့ fic တစ်​ပုဒ်​ကို ​ကျောရိုးယူပြီး​ရေးထားတာပါ... လူနာမည်​​တွေ ဇာတ်​လမ်း​တွေ​တော့ အကုန်​လုံး မတူပါဘူး .... ဇာတ်​လမ်း​လေးကို သ​ဘောကျလို့ပါ...
လိပ်ပြာတေးချင်း (나비노래) [BaekhyunxOC]
21.9K 2.1K 11
-나비노래- -Butterfly Song- -BaekhyunxOC- -생일축하해-
101K 8.4K 27
XØXÔ uni၏ပေါက်ကျော်ဘွဲ့၊အတင်းတုတ်ခြင်း၊ ပွစိပွစိပြောရာတွင်အင်မတန်ကျွမ်းခြင်း၊စပ်စုစိန်လေးဖြစ်သောByun Baekie၏ချစ်သူPark Chanyeol၏ဒုက္ခများကိုတစ်ဝကြီးရှုစားနိုင်ပါသည်ရှင်... Baekkieအရမ်းရစ်လွန်းသောကြောင့်သူတို့အချစ်ရေးကသာယာပမလား??? Chanyeolကရောဆက်ပြီးသည်းခံနေနိုင်မှာလား??? အရမ်းသဝန်တိုပြီးရစ်တတ်တဲ့Baekieလေးအတွက်Yeolပေးထား...
382K 20.6K 30
Character : Luhan, Sehun, HunHan Original Author : Shikamin (Rewrite in Myanmar. But not all the same) Genre : Yaoi, Drama, angst, **18 fic** ………………………………………………………………………………. Foreword တွက်ချက်မှုအပိုင်းတွင် တစ်ဖက်ကမ်းရောက်ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်သော၊ တစ်ခဏစဉ်းစားလိုက်သည်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများကို ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တွက်ခ...
22.9K 1.7K 10
135K 12.9K 39
လောကမှာ ငွေရှိတိုင်း အရာအားလုံးကို ဖြစ်နိုင်တယိလို့ သင်ထင်မြင်ယူဆပါသလား??may.be--??
139K 7.1K 19
7.1K 799 8
KrisHo KaiHo KrisYeol
သူ ချစ်သည် ထက် ကျွန်မ သာ၍မုန်းခဲ့သည်
4.4K 499 3
Chanbaek , Kaisoo
7.6K 311 1
Cute love stroy about You( Kristine ) and Chanyeol EXO Someone call the doctor, I need her I can't stand it forasingle day You're an addiction I don't want to escape Oh too much, it's you, your love, this is overdose Too much, it's you, your love, this is overdose "I took an OVERDOSE of the drug called YOU......" en...
2.7K 154 2
Character : Suho & You Foreward မိုးစက်လေးတွေကျလာတိုင်း သူရောက်လာတတ်တယ်…… နေရောင်ခြည်ထွန်းလင်းလာသည်နှင့်အမျှ သူရုတ်တရက်ခွေကျပြီး ကျွန်မအနားကထွက်ခွာသွားတတ်ပြန်တယ်……… မိုးရွာလာရင် ကျွန်မအင်မတန်ပျော်ရွှင်ရပေမဲ့ နေသာရင်ဝမ်းနည်းလိုက်တာရှင်…… မိုးရယ်ရွာပါတော့နော်…………………
205K 16.9K 32
Teaser....... Wu Baekhyun>> ဟဲ့​ခွေး ဟဲ့​ခွေး သွားဆိုသွား​နော်​ ငါပစ်​ထလိုက်​မှာ... ဂျက်​ဂျက်​ငါ့ဆီ​ပြေးခဲ့...ခံမကိုက်​နဲ့​လေ ... Park Chanyeol>> ဟိတ်​ ! အာ့​လောက်​စိုးရိမ်​​နေရင်​ မင်းဝင်​ကိုက်​လိုက်​ပါလားကွ ... A/N.... CB fic ​လေးပါလို့ ပထမဆုံးfic မို့ အမှားပါရင်​ခွင့်​လွှတ်​ပါ​နော်​reader ​လေးတို့ We Are One EXO...
36.2K 3.7K 23
113K 10.2K 30
*Hunhan *Yaoi *အချစ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမုန်း *အမုန်းကြောင့် မှားမိပြီးမှ *နောက်ဆုံး အချစ်တွေ ပြန်လည်ရှင်သန်မှာလား ဆိုတာတော့
1.4K 188 4
Rain Drop On Earth
18.4K 1.6K 14
If you haveachance to Come back to your love but only 14days to prove how much you love that person.. A story between Junmyeon and Kyungsoo.. The one who sacrified for love.. The one who wanna sacrify for love.. # Love won't die even when the person pass away # # I love for all of my life.. past present and futur...
647 71 1
51.2K 4.9K 17
My Babo Girl
25.2K 1.6K 4
1.7K 141 2